Posted by Tranquillus | Mar 11, 2021 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Khaladaadka higgaadinta badanaa waa la yareeyaa markay saameyn xun ku yeelan karaan xirfad xirfadeed. Xaqiiqdii, waxay kaa siinayaan sawir xun oo kaa gaabin kara horumarkaaga. Arintaan markay jirto, waxaa muhiim ah in la ogaado sida looga fogaado khaladaadka higaada shaqada. Raadi maqaalkan.
Kani waa mid ka mid ah furayaasha in khaladaadka higaada shaqada lagu sameyn waayo. Xaqiiqdii, akhrisku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad kalifto ereyada cusub iyo inaad leedahay naxwaha wanaagsan, iskuxirka wanaagsan iyo higgaadda wanaagsan. Intaa waxaa sii dheer, kuwa inta badan wax akhriyaa waa kuwa guud ahaan qaladaadkooda yar.
Markaad caado ka dhigato akhriska, waxaad si dhakhso leh u ogaan kartaa khaladaadka higaada shaqada.
Uma baahnid inaad akhrido buugaag waaweyn si aad u dhammaystirto higgaadintaada. Waxaad si fudud uga akhrisan kartaa qormooyinka internetka iyo sidoo kale joornaalada.
Dib u hagaaji isku xidhka
Badanaa, qaladaadka badankood waxay laxiriiraan isku xirnaanta, gaar ahaan chor. Marka si loo hubiyo in la qoro qoraalo sax ah qalad la'aan, waa inaad dib u eegto isku xidhkaaga. Adeegso miisaska iskuxirka si aad u aqriso iskuna day inaad u fahamtid xarfaha kala duwan.
Isku hubso Bescherelle
In kasta oo aad ka heli karto wax kasta oo aad ka raadineyso internetka, way ka ammaan badan tahay inaad haysato nooca waraaqda ee Bescherelle oo la heli karo. Tani waxay fududeyn doontaa barashada naxwaha, higgaadda iyo isku xirnaanta. Shuruucda iyo dhaqammada waxaa loogu sharaxay halkaas qaab fudud oo cad si aad dhaqso ugu xafiddo.
Intaas waxaa sii dheer, waxay noqon doontaa aalad la isku halleyn karo oo aad isku halleyn karto markii shaki kaaga jiro.
Waa muhiim inaad ku tababarto si aad u ogaatid cilladahaaga oo aad awood ugu yeesho inaad wax ka qabato. Tan awgeed, waxaad sameyn doontaa qaladaad higgaado oo yar shaqada.
Laylintu waa lama huraan barasho kasta, markaa muhiimada ay leedahay inaad sameyso jimicsi si aad u xoojiso awoodaada. Marka ay timaado higgaadinta, laylisyada ugu fiican ee la sameeyo waa kalitalisnimo.
Dareenkan, waxaad ka heli doontaa boggaga internetka ee kelmadaha kuu oggolaanaya inaad ku dhaqmaan. Fiidiyow ayaa la bilaabay si aad u maqasho dhawaaqa ka dibna waxaad yeelan doontaa dukumiinti sixitaan ah dhamaadka.
Kor u aqri
Marka aad dhammeyso qoritaanka dukumiinti xirfadle ah, qaado waqti aad dib ugu akhrido. Haddii aadan hubin qaybo gaar ah inta aad wax akhrinaysid, dhibaato ayaa ka jirta isku xirnaantaada ama higgaadintaada. Akhriska kor ayaa kuu ogolaanaya inaad isticmaasho hababka mnemonic ee aad soo baratay.
Adoo adeegsanaya qalab toos ah
Si looga fogaado khaladaadka higaada shaqada, waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa qalab sixitaanka kombuyuutarka shabakada. Way kugu filnaan doontaa in la galiyo qoraalkaaga si khaladaadka loo ogaado loona saxo. Dareenkan, waxaad ka heli doontaa toosiyayaal aad ugu guuleysta internetka.
Si kastaba ha noqotee, waa in maskaxda lagu hayaa in hagaajinta otomaatiga uu leeyahay xaddidaadyo. Oo sidaas daraaddeed, waxay dhacdaa in khaladaadka qaarkood isaga ka baxsadaan. Intaa waxaa sii dheer, barnaamijka sixitaanka ma lahan awood uu ku fahmo macnaha guud ee uu leeyahay qof bini'aadam ah.
READ Hagaaji qaabka qoraalkaaga: isku xirayaasha macquul ah
Sideed uga fogaan kartaa khaladaadka higaada shaqada? 11-Maarso, 2021Tranquillus
horeXaq ma u leeyahay inaan ka gorgortamo muddada aan qaadanaayo fasaxa mushaharka leh?
socdaSidee guul looga gaaraa qaabkeeda?